Urdun: dhaqdhaqaaqyo afgembi oo loo xidhay boqor hore iyo xiisad dalka ka taagan
Home WARARKA Urdun: dhaqdhaqaaqyo afgembi oo loo xidhay boqor hore iyo xiisad dalka ka...
Jordan-(Berberanews)-Iyadoo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan inqilaab iyo amiirkii hore ee taajka oo xabsi guri ku jira, dadka reer Urdun waxay ka baqayaan in la qabqabto.
Dadka reer Urdun waxay soo tooseen axadii su’aalo badan kadib markii saraakiil badan oo heer sare ah la xidhay – iyo amiir caan ah oo xabsi guri la geliyay – taas oo laga yaabo inuu ahaa burburintii isku daygii afgambi.
Dhaqdhaqaaqayaasha muddo dheer ka mudaaharaadayay musuqmaasuqa boqortooyadan kheyraadka ku duugan laakiin istiraatiijiyad ahaan muhiimka u ah, waxaa sidoo kale jirtay cabsi ah in cabudhin hor leh soo foodsaarto.
“Wixii sida weyn uga socday meelo xidhan ayaa haatan banaanka u soo baxay” sidaa waxaa yidhi Daoud Kuttab, oo ah agaasimaha shabakada warbaahinta bulshada ee fadhigeedu yahay Amman, oo sheegay in mudaharaadyada heerka hoose ee caasimada ay la kulmeen talaabooyin ciqaab ah oo xad dhaaf ah dhawaanahan. “Warbaahinta rasmiga ah gabi ahaanba waa aamusan tahay waxaanan ognahay inay jiraan waxyaabo badan oo ku saabsan sheekada aynaan arkayn.”
Fariin cad oo ah inaan loo dulqaadan doonin wax mucaarad ah ama dhaleeceyn ah oo ka dhan ah boqorka, madaxa baarlamaanka, Faysal al-Fayez ayaa Axadii sheegay in “boqorka uu yahay khad cas” dalkuna uu ka hor istaagi doono “gacan khaa’inul waddan oo gariiraya ujeedadiisu tahay khalkhal galinta amniga iyo xasiloonida.
” Kuwa la xidhay sabtidii waxaa ka mid ahaa Sharif Hasan, xubin ka tirsan qoyska boqortooyada, iyo Bassem Awadullah, oo ah sarkaal sare oo hore oo ka tirsan Maxkamadda Royal Hashemite ee Jordan oo sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee Jordan ee dowladda Sacuudiga. Si aad u weyn, millatariga Jordan ayaa amar ku bixiyay in xabsi guri lagu dhigo amiirkii hore ee caanka ahaa Hamzeh bin Hussein.
Ku baryaya in runta iyo caddaaladda ay guuleysan doonaan dhammaan dhibbanayaasha aan waxba galabsan ee sumcad xumadan. Ilaahay ha barakeeyo oo ha nabad geliyo, ”ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray ninka hooyadii u dhalatay Mareykanka, Queen Noor, Axaddii.
Yasser Majali, madaxa xafiiska Hamzeh, Sheikh Sameer Majali, iyo dhawr xubnood oo kale oo sarsare oo ka tirsan qabiilka Majali ee saamaynta ku leh jagooyinka caanka ah ee dawladda Urdun iyo milatariga.
Hadal ay sii daayeen Axadii, qabiilka Majali waxay ku tilmaameen qabqabashadu mid “sharci daro ah”, arrintuna ay ahayd “maalin madow taariikhda Jordan.”
Hamzeh, oo ah 41 jir, boqorka xukuma walaalkiis oo ay isku aabo uun yihiin, wuxuu amiir u ahaa boqorka Jordan afar sano ilaa 2004, markii awoodiisa lagu wareejiyey wiilka curadka boqorka, Hussein.
afgembi oo loo xidhay boqor hore iyo xiisad dalka ka taagan
Previous articleRuushka oo jabsaday sirtii qaranka Maraykanka: Xulashada Dunida
Next articleAkhriso Magacyada Masuulliyiin ay ansixiyeen Golaha Wakiillada Somaliland